Batariga Tesla Powerwall 2, jiilka labaad ee baytariyada Tesla | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Kaydinta tamarta, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta kuleylka ee kuleylka ah, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Teknolojiyada cusub
La Tesla Powerwall 2 Waa jiilka labaad ee batteriga caanka ah ee loo yaqaan 'Tesla Powerwall'. Baytariyada Tesla waxay ku guuleysteen wax aan macquul aheyn, waxay si weyn ugu boodayaan qaabkan cusub, iyagoo si weyn u hagaajiyay wax horeyba u fiicnaa.
Powerwall waxay la midowdaa tamarta qoraxda si looga faa'iideysto awoodda badan ee qorraxda oo aan yareyno ku tiirsanaanta shidaalka. Tamarta cadceedda waa la keydin karaa maalintii, habeenkiina waa la isticmaali karaa si guri waliba iskiis u bixiyo.
1 Tesla Powerwall 2, waa xalka tamarta guriga oo dhameystiran
2 Faa'iidooyinka batteriga Tesla Powerwall 2
2.1 Wax badan ka hel tamarta qorraxda
2.2 Waxaad ka heli kartaa madax-bannaanida shabakadda awoodda
2.3 Ka ilaali guryaha guryaha koronto la'aanta
2.4 Powerwall 2, batteriga ugu jaban
2.5 Ka hubi tamartaada meel kasta
3 Hawlgalka Tesla Powerwall 2
3.1 Jaangooyada Tesla Powerwall 2 AC
3.2 Shaxda shaqada Tesla Powerwall 2 DC
3.3 Tesla Powerwall 2 ee rakibidda XNUMX-waji
4 Tesla Powerwall 2 Noocyada Batariga
5 Batariga Tesla Spain
6 Qiimaha Batariga Tesla
7 Saqafka qoraxda
7.1 La heli doono goor dhow
8 Saddexda tiir ee tamarta ayaa isbadala
9 Batariga Tesla iyo Xeerka Boqortooyada ee is-isticmaalka
9.1 Wareegtada Boqortooyada 900/2015
Tesla Powerwall 2, waa xalka tamarta guriga oo dhameystiran
Batariga cusub ee lithium-ion ee loogu talagalay guryaha iyo ganacsiyada yaryar Tesla Powerwall 2 wuxuu labanlaabaa awoodda kii ka horreeyay. Nooca ugu horreeya wuxuu leeyahay kaydinta 6,4 KW.
Waxa kale oo ku jira awood badan qalabka korantada si loogu badalo tamarta ku keydsan DC (Direct Current) tamar waxtar leh oo ku jirta AC (Alternating Current), si aad ugu isticmaali karto guriga oo dhan.
Iyada oo labanlaabaysa awoodda jiilka koowaad, Tesla Powerwall 2 ayaa awood u yeelan kara guri cabir dhexdhexaad ah (2 ama 3 qol) maalin dhan. Waxaan sidoo kale iftiimin karnaa cabirkeeda is haysta, awoodda u leh isu-geynta dhowr qaybood iyo qalabka wax lagu beddelo, waxay u oggolaaneysaa rakibidda in si fudud loo sameeyo meel kasta.
Faa'iidooyinka batteriga Tesla Powerwall 2
Wax badan ka hel tamarta qorraxda
Xitaa guryaha halkaasoo nidaam soosaara sawir-qaadis qorraxda oo bilaa batari ah horay u jirtay, qayb weyn oo ka mid ah wax-soo-saarka nidaamkaas ayaa lumay markii lagu quudin jiray shabakadda ama lagama faa’iideysto, Marka la isticmaalayo eber shaqooyinka duritaanka.
Powerwall 2 waxaad ku keydin kartaa dhamaan wax soo saarka nidaamka qoraxdaada waxaadna ka faa'iideysan kartaa qoraxda, si aad ugu isticmaasho tamartaas daqiiqad kastaAma maalin ama habeen.
Waxaad ka heli kartaa madax-bannaanida shabakadda awoodda
Adiga oo adeegsanaya mid ama laba baytariyada lithium Tesla Powerwall 2 iyo adigoo ku daraya tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta', waxaad awood u yeelan kartaa gurigaaga adigoon ku xirneyn shabakadda korantada ee dadweynaha, oo leh keydka sanadlaha ah ee tani ay muujineyso
Ka ilaali guryaha guryaha koronto la'aanta
Powerwall 2 waxay ka ilaalisaa gurigaaga koronto la’aanta, waxayna u ogolaataa laydhka iyo dhamaan qalabka inay sii wadaan inay ku shaqeeyaan dhib la’aan, ilaa inta adeegii laga soo celinayo.
Powerwall 2, batteriga ugu jaban
Intaa waxaa dheer, baytariga Tesla Powerwall 2 wuxuu siiyaa qiimaha ugu fiican halkii kWh ee awoodda suuqa, sidaas awgeedna wuxuu la qabsanayaa baahida tamarta maalinlaha ah ee guryaha badankood, iyo yaraynta kharashyada tamarta go'an ee korantada caadiga ah.
Powerwall waa nidaam si otomaatig ah u shaqeeya oo si fudud loo rakibo una baahan dayactir la'aan
Ka hubi tamartaada meel kasta
App-ka 'Tesla' waxaad si fudud ugu maamuli kartaa Powerwall-kaaga, baararka qoraxda, ama Model S ama X-gaaga, waqti kasta, iyo meel kasta.
Hawlgalka Tesla Powerwall 2
Batariga Tesla Powerwall 2 wuxuu yeelan doonaa laba nooc:
Tesla Powerwall 2 AC, oo ay ku jiraan inverter oo ay ku jiraan dhinaca AC
Tesla Powerwall 2 DC, oo aan leexin iyo la jaan qaada rogayaasha xeedho ee soo saarayaasha waaweyn (Solaredge, SMA, Fronius, iwm)
Jaangooyada Tesla Powerwall 2 AC
Sawirka hore, waxaad ku arki kartaa jaantus hawlgalka caadiga ah ee a tesla powerwall 2 batari AC, oo ay weheliso nidaamka jiilka sawir-qaadista, oo ay weheliso isku-xidhka isku xidhka shaashadda guriga.
Mitir tamar ayaa lagu rakibay dhamaadka madaxa (Tesla Energy Gateway) ee korontada guriga, taas oo mas'uul ka ah cabirka in isticmaalka guriga ka dalbo awoodda shabakadda ama maahan. Waxay sidoo kale cabbiraysaa tamarta u baxday shabakadda, haddii ay dhacdo in tamarta laga helo nidaamka sawir-qaadista ay ka weyn tahay tan uu dalbaday guriga xilligaas.
Sidan, ayaa Batariga Powerwall 2 keydinta tamarta haddii ay jirto waxsoosaar fara badan oo soosaarka sawir-qaadista ah ama ay siiso tamar haddiiba ay xirmooyinka aysan bixin karin dhammaan awooda iyo tamarta uu dalbado guriga, sida maalmaha ciida ama habeenkii.
Qaabkan shaqeynta wuxuu isku dayayaa inuu ka cuno tamarta ugu yar ee lagama maarmaanka u ah shabakadda, isagoo soo saaraya keyd badan inta badan.
Shaxda shaqada Tesla Powerwall 2 DC
Tusaalaha Powerwall 2 DC wuxuu u shaqeeyaa si toos ah, oo kuxiran sida batteriga hogaamiyaha caadiga ah, xeedho isku-dhafan oo isku-dhafan ama isku-dhafan isku-dhafan (SMA, Fronius, Solaredge, iwm).
Qaabeynta ayaa u oggolaan doonta la shaqeynta batariga Tesla Powerwall ee nidaamyada go'doonsan, oo lagu lifaaqay dhinaca tooska ah ee hadda jira, iyo ma aha oo keliya rakibidda shabakadaha ku xiran, sidaa darteed ikhtiyaarka offgrid sidoo kale waa la fikiray. Tani waxay tusinaysaa dhinaca kale in fiilooyinka fiilooyinka ee Powerwall AC ay ka duwanaan doonaan nooca DC.
Tesla Powerwall 2 ee rakibidda XNUMX-waji
Batariga Tesla Powerwall 2 wuxuu ku shaqeyn karaa rakibidda saddex waji markaad la shaqeyneyso rogaal-wadeyaal saddex-waji ah, sida Fronius Symo Hybrid.
Powerwall 2 ma soo saarto sedex waji wax soo saar hadda, si kastaba ha noqotee waxaa lagu rakibi karaa nidaam saddex waji ah iyadoo la dhigayo batteriga Tesla mid ka mid ah wejiyada. Batariga ayaa sidoo kale lagu rakibi karaa weji kasta si loo helo keydinta tamarta dhammaan saddexda weji.
Tesla Powerwall 2 Noocyada Batariga
Awoodda: 13,5 kWh
Qoto dheer ee dheecaanka: 100%
Waxtarka: 90% wareeg buuxa
Potencia: 7 kW ugu sarreysa / 5 kW joogto ah
Codsiyada u dhigma:
Is-adeegsiga tamarta qoraxda
Beddelka lacag bixinta waqtiga isticmaalka
Ka madaxbanaan shabakadda korontada
Warranty: 10 sano
Xajmiga: Ilaa iyo 9 unugyada Powerwall-ka ah ayaa lagu xiri karaa si is barbar socda si ay u siiyaan koronto guryaha cabbir kasta ha lahaadeene.
Heerkulka hawlgalka: -20 ° C ilaa 50 ° C
Cabbirada: L x W x D: 1150mm x 755mm x 155mm
Miisaanka: 120 kg
Ku rakibida: Dabaq ama derbi ku xirid. Daboolkeeda waara wuxuu ka ilaaliyaa biyaha ama siigada wuxuuna u ogolaadaa in lagu rakibo gudaha iyo dibada (IP67).
Shahaadada: Shahaadooyinka UL iyo IEC. Waxay u hoggaansan tahay xeerarka shabakadda korantada.
Amniga: laga ilaaliyo khatar kasta oo taabashada ah. Ma jiraan fiilooyin dabacsan ama hawo-mareenno.
Qaboojiyaha dareeraha ah: Nidaamka sharciyeynta kuleylka ee dareeraha ayaa nidaamiya heerkulka gudaha ee Powerwall si loo kordhiyo waxqabadka batteriga dhammaan xaaladaha deegaanka.
Batariga Tesla Spain
La batari tesla Powerwall 2 waxaa laga heli doonaa Spain sanadka 2017, inkasta oo aan la ogeyn waqtiga ugu dambeysa ee la siidaayo. Rakibaadda waa in si khaas ah loogu fuliyaa rakibayaal uu caddeeyey Tesla, si loo hubiyo hawlgal dhammaystiran iyo a 10 sano damaanad cillad la'aan, xaaladduna, batteriga ayaa gebi ahaanba lagu beddelayaa lacag la'aan.
Qiimaha Batariga Tesla
El Qiimaha batteriga ee Tesla Powerwall 2 waa qiimaha ugu macquulsan halkii kWh ee awooda suuqa maanta, hadii aan isbarbar dhig ku sameyno qiimaha tartamayaasha tooska ah, sida LG Chem RESU ama Axitec AXIStorage (in kasta oo kuwani ay bixiyaan faa iidada ah in lagu isticmaalo go'doon nidaamyada sawir-qaadista oo ay weheliyaan xeedho wanaagsan oo wax lagu beddelo, sida SMA Sunny Island ama Victron Multiplus ama Quattro). Qiimaheedu wuu socon doonaa waxay noqon doontaa € 6300, oo lagu daray € 580 si loogu rakibo.
Qiimaha nooca ugu horeeya ayaa waxyar ka jaban, qiyaastii 4.500 euro. Ha iloobin in loogu talagalay in lagu kabo nidaamka qoraxda sawir-qaadista sidaas darteed, halka ay baalayaasha qoraxda ayaa soo saaraya, gurigu si toos ah ayuu uga cunaa iyaga ama haddii uusan jirin wax isticmaal ah, tamartaan waxay ku shubtaa batteriga Tesla.
Marka aysan kaliya aheyn taarikada ma shaqeynayaan, guriga wuxuu isticmaalaa tamarta ku keydsan batariga hadii uu wali ubaahanyahayna inbadan, wuxuu kuxiran karaa shabakada guud ee korontada wuuna cuni karaa. Iyada oo lagu rakibayo sawir-qaadista, qiimaha mashruuca loo yaqaan 'turnkey project' tag ilaa 8.000 ama 9.000 euro. Kharashkan ayaa la shaacin doonaa inta u dhexeysa toddobada ilaa toban sano
Laakiin sharadka Tesla kuma koobna oo keliya baytariyada, laakiin wuxuu soo saarayaa taariko ka buuxisa baytariyadaan tamar. Xalka fiican ee Elon Musk wuxuu ahaa inuu abuuro baararka qoraxda la qabsan kara dhammaan saqafyada guryaha qoyska, oo leh muuqaal qarsoodi ah oo ka qiimo hooseeya taarikada caadiga ah
Marka laga hadlayo saqafyada qoraxda, waxay ka samaysan yihiin alwaaxyo muraayad ah oo ay ku jiraan unugyo qorraxda isku dhafan, sidaa darteed waxay u muuqdaan kuwo bilic leh ("ama ka sii wanaagsan" Elon Musk oo lagu ballanqaaday soo bandhigidiisa) marka loo eego saqafyada caadiga ah. Foornooyinka mid waliba wuxuu leeyahay a daabacaad gaar ah, taas oo iyaga siinaysa muuqaal farsamo ku dhow sidaa awgeedna laba saqaf isku mid noqon maayaan.
Intaa waxaa sii dheer, Tesla wuxuu sii deyn doonaa dhowr naqshadood oo kala duwan oo u dhigma qaabeynta guri kasta. Tani waa wada shaqeyn ka dhaxeysa SolarCity iyo Tesla. Sida laga soo xigtay Elon Musk, "Waxaan u abuurnay Tesla shirkad baabuurta korontada ku shaqeysa, laakiin dhab ahaantii waa wax walba oo ku saabsan dardargelinta u gudubka ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo."
La heli doono goor dhow
Iyadoo loo marayo websaydhka shirkadda, dhammaan kuwa doonaya inay sidaas sameeyaan waxay ku qaban karaan saqafkan qorraxda. Wadammada kala duwan ee uu Tesla doortay inuu dhigo saqafka qorraxda ee iibka ah waxaa ka mid ah Spain, halkaas oo deebaaji ah 930 euro waa in la sameeyaa si loo keydiyo sheygan taasi ma imaaneyso ilaa 2018.
Marka ay timaado moodooyinka, Tesla wuxuu kaliya sii daayay laba ka mid ah afarteeda nooc ee saqafyada qorraxda: marmarka muraayadda madow ee muraayadda ah iyo marmarka muraayadda adag. Dhanka kale, toscana, nooc la mid ah taaybalka caadiga ah, iyo xajmiga, ayaa imaan doona sanadka 2018.
Saddexda tiir ee tamarta ayaa isbadala
Musk ayaa sidoo kale sharaxay inay jiraan saddex qaybood oo loo beddelayo tamarta qorraxda: jiil (qaab qoraxda), kaydinta (baytariyada) iyo gaadiidka (baabuurta korontada). Ujeeddadiisu waa inuu saddexda tallaabo ku daboolo shirkaddiisa Tesla.
Sidaa awgeed fikradda ah ku biiridda darbiyada iyo baytariyada. Illaa iyo hadda, qof kasta oo raba inuu ku sharaddeeyo tamarta qorraxda oo uu sameeyo la'aan korantada korantada sida ugu badan ee suurtogalka ah wuxuu u baahday inuu ka iibsado albaabbada shirkad labaad, iyo baytariyada Tesla. Hadda ka dib, tallaabooyinka ayaa noqon doona wax badan ayey fududeeyaan, maxaa yeelay baalayaasha iyo baytariyada ayaa isu imaan doona. Haddaynu intaas ku darno baabuurta korontada ee Tesla iyo xeedho cusub, waxaannu leennahay 3 ka mid ah 1. Hoos waxaan ka arki karnaa moodooyinka gawaarida ee kala duwan ee ay shirkaddu leedahay, si loo fuliyo 3-dii 1 ee kor looga hadlay.
El Tesla Model S Waa saloon shan albaab leh. Suuq galisay ilaa 2012, waxay leedahay qiimeynta ugu sareysa dhanka amaanka waana guul dhanka iibka gudaha iyo dibedda Mareykanka. Ku qalabaysan baakidh 60, 75, 90 ama 100 kWh ah, waxay ka sarreysaa Tesla Roadster madax-bannaanideeda, iyada oo awood u leh inay u safarto in ka badan 400 kiilomitir inta u dhexeysa dacwadaha. Mashiinka wuxuu ku shaqeeyaa dariiq dambe oo baytariyada ayaa dhulka jiifa. Natiijada? Xarun hoose oo cuf isjiidadka si saloonku uga fogaado isla masaafada wadada baabuurka isboortiga. Tusaalaha Tesla S Waxaa lagu heli karaa laba qaabeyn jajab oo kala duwan: gadaal iyo laba mashiin oo dhan-giraangiraha. Qaabeynta ugu dambeysa waxay ku qalabeysaa matoor labada geesood, si dijitaal ah loola socdo loona xakameeyo, taas oo u oggolaaneysa jarista ugu fiican xaalad kasta. Naqshadda 'Tesla Model S' waxay ku sarreysaa awoodda baakadka batteriga iyadoo leh aerodynamic design ah khadadka qulqulaya oo u oggolaanaya iska caabin yar socodka hawada. Gudaha, shaashadda taabashada 17-inji ah ayaa soo jiidasho leh, xagalna u jeeda darawalka oo ay ku jiraan hababka habeen iyo maalinba ee muuqaalka aan mashquulka lahayn. Dusha sare kasta, dahaadhka iyo tolida ayaa isku dheelitiraya taabashada iyo aragtida ugu fiican, iyo waliba ixtiraamka deegaanka.
Tesla wuxuu ballaariyay noocyadeeda kala duwan ee moodooyinka korantada leh Tesla Model X. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee gaariga iyo astaamaha mustaqbalkiisa: albaabbada dambe ee xiisaha leh taas oo ku taal magaalada Tesla oo ay ugu magac dareen 'Albaabbada baalka hawk'. Gudaha waxaad ka heli doontaa boos bannaan iyo illaa saddex saf oo kuraas ah oo loogu talagalay toddobo rakaab ah. Waxay leedahay batari 90 kWh ah iyo liis dheer oo qalab ah oo ay ku jiraan gawaarida la dhigto, kuraasta maqaarka ee kululaysa, laydhadhka maalinlaha shaqeeya, bareega degdega ah ee otomaatiga ah, isku laabida safka saddexaad ee kuraasta, marinka furaha aan lahayn iyo qalabka iswada. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee Tesla Model X waa badhanka kiimikada ama badbaadada nafleyda. Elon Musk wuxuu ku faanay inuu caddeeyo in Tesla Model X uu yahay gaariga ugu horreeya adduunka loo diyaariyey weerar kiimiko ama bayooloji ah, iyada oo ay ugu mahadnaqeyso shaandhaynteeda hawada ee aadka u weyn, illaa iyo toban jeer ka weyn tan baabuurta kale ee casriga ah. Tani waxay ku guuleysaneysaa in xaaladaha caadiga ah, qolka 'Tesla Model X' tayada hawada laga helo heerka qol kasta oo isbitaal ah. Qaabka 'weerarka bayoolojiga', shaandhadaani waxay awood u leedahay inay sifeeyaan bakteeriyada 300 jeer kafiican ta caadiga ah, 500 jeer oo xasaasiyado kafiican, 700 jeer wasakheynta deegaanka iyo ilaa 800 jeer oo waxtar badan u leh shaandhaynta fayrasyada.
Sugitaan dheer kadib, Tesla Motors ayaa soo bandhigaya Tesla Model 3, kaas oo noqonaya xubinta saddexaad ee imika tirada Tesla. Loogu talagalay inay tahay qaabka ugu dhaqaalaha badan (Model 3 wuxuu ka bilaaban doonaa $ 35.000 Mareykanka), wuxuu bixiyaa qiyaastii qiyaastii 350 kiiloomitir, marka lagu daro inuu awoodo inuu sameeyo 0 ilaa 100 km / saacaddii wax ka yar lix ilbiriqsi. Moodelkani wuxuu dhammaystirayaa 'Master Plan' ee Elon Musk iyo Tesla, oo ka bilaabmay 'Tesla Roadster', wuxuu ku tallaabsaday Model S, wuxuuna ku koray inuu soo koobo Model X. Tesla Model 3 waa sedan is haysta (wuxuu leeyahay cabir dhan 4,7 mitir dheer) ) oo leh shan kursi, 100% koronto, kuwaas oo ujeedadiisu tahay inuu la tartamo sedan qiimo jaban sida BMW 3 Series ama Audi A4. Sida moodooyinka kale ee ku jira qaybta 'Tesla', waxay noqon doontaa gaari farsamo ahaan aad u horumarsan, maaddaama ay la imaan doonto qalab ay ku shaqeynayaan qalab wadis madax-bannaan oo awood u leh inay si dhakhso leh dib ugu soo celiyaan.
Batariga Tesla iyo Xeerka Boqortooyada ee is-isticmaalka
Nasiib darrose, Isbaanishku wuxuu la dhibtoonayaa mid ka mid ah sharciyadii ugu xumaa ee Is-cunitaanka adduunka. Caankii la yaqaan "cashuurta qorraxdaLa wareegida xarunta noocan ah ayaa caqabad ku ah, halka adduunka intiisa kale kobcinteeda aan la joojin karin.
Wareegtada Boqortooyada 900/2015
El Wareegtada Boqortooyada 900/2015 waxay joojisay "sharci-darrada" xarumaha is-istcimaalka, oo qeexaya xaaladaha farsamo iyo maamul si ay awood ugu yeeshaan inay ku sharciyeeyaan qaab gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, si hufan qaar ka mid ah shuruudahaan farsamo-maamul, sida kan waajibaadka in la rakibo mitir labaad iyo nidaamka ay tahay in lagu fuliyo shirkadda qaybinta waxay ka dhigaysaa geeddi-socodka sharciyeynta mid qaali ah, aad u adag oo gaabis ah, ka hortagga iyo niyad-jabinta xarumaha is-isticmaalka.
Haddii intaas oo dhan aan ku darno cashuurta qorraxda, taas oo ah lacag laga qaado tamarta la soo saaray, taas oo keliya rakibidda guryaha ama dhismayaasha qalabka korontada ee qandaraaska haysta oo ka yar 10kW hal waji ayaa si ku-meelgaar ah loo sii daayay, kala-soocidda waa wadar.
Intaas waxaa sii dheer, rakibaadda ku urursan baytariyada, sida batariga Tesla Powerwall 2, Wareegtada ayaa sidoo kale ku dallacdaysa kharash go'an oo ku tiirsan awoodda, fikraddani ma aha mid aad qaali u ah, laakiin waxay ku kacaysaa oo ka sii deyneysaa xitaa inbadan qalabka is-soo-saarka korantada.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, warka wanaagsani waa kaas Soo Jeedin Loogu Talagalay Sharciga Lagu Dhiirrigeliyo Is-isticmaalka ayaa hadda tixgelin laga siinayaa Golaha WakiiladaWeli ma ogin inay horumar gaari doonto, tan iyo markii ay Dowladdu diidmada qayaxan ku diidday soo-jeedinta. Ciudadanos, isla markaana dhiirrigeliye soo-jeedinta iyo taageerada dowladda ee diidmada qayaxan, ayaa maanta ka fikiraya in la sii wado ama la qaado, iyadoo ku xiran wadahadallada lala yeelanayo Wasaaradda Warshadaha.
Haddii soo jeedintu socoto, waxay u badan tahay inay meesha ka saari doonaan caqabadaha ugu waaweyn ee hor istaagaya Isticmaalka is-isticmaalka dalkeenna, laga bilaabo digreeto RD900 / 2015: baahida loo qabo counter labaad, nidaamka loo maro qeybiyeha iyo khidmadaha go'an iyo kuwa isbeddelka ah, canshuuraha qorraxda ee caanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Batariga Tesla Powerwall 2
Salaan: Waxaan rabaa inaan ku iibsado batariga Tesla 2 aaladda 12KW Inverter. Ma fahmin haddii mid igu filan yahay ama haddii aan laba isku daro.
Waa maxay Shixnad loogu talagalay Puerto Rico?
Jawaab ku sii Yolanda Guzmán
Aad u xiiso badan .. !!
Jawaab Bayguel Baldiviezo
MID AMA BADBAADO BADAN BAA LOOGA BAAHAN YAHAY SHARAX LOO BAAHAN YAHAY 12 KW, AAD LEEDAHAY QORAALO BADAN, MAXAA LOOGU TALAGALAY IN LA JOOJIYO XIRIIRKA CFE IYO LA SHAQAYNAYO BAANARADA IYO BATAROOYINKA SI LOO SIIYO LAYLATARKAAS
Jawaab ANTONIO ZAVALA